Ck-Mb စမ်းသပ်မှု၊ Myoglobin စမ်းသပ်မှု၊ Troponin I စမ်းသပ်မှု - Laihe ဇီဝနည်းပညာ
Novel Coronavirus (COVID-19) စမ်းသပ်ကိရိယာ
Hangzhou Laihe Biotech Co.,Ltd ကို 2012 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
(ယခုအခါ Laihe Biotech ဟုရည်ညွှန်းသည်) အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း၊ POCT လက်ငင်းရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနယ်ပယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုအမြဲအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး၊ မြန်ဆန်တိကျပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကျန်းမာရေးထောက်လှမ်းမှုထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအများပြည်သူသို့ပေးအပ်ရန်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။
ဘရာဇီးရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် အားလုံးကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
CHINA (BRAZIL) TRADE FAIR 2022 ပြပွဲတည်နေရာ- Sao Paulo Exhibition & Convention Center လိပ်စာ- Rodovia dos Imigrantes, km 1.5 cep 04329 900 – São Paulo – SP Booth No.: K111, ...
သတိရှိပါ။Monkeypox virus သည် လူမှ လူသို့ ကူးစက်ပြီး ...
COVID-19 ကပ်ရောဂါက မပြီးသေးပါဘူး၊ ကလေးတွေမှာ အကြောင်းရင်းမသိရသေးတဲ့ အသည်းရောင်ရောဂါကို မစစ်ဆေးရသေးသလို ဗိုင်းရပ်စ်အသစ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကတော့ မျောက်ကျောက်...
တူရကီနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် အားလုံးကို အထူးကြိုဆိုပါသည်။
တရုတ် (တူရကီး) ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ 2022 ပြပွဲတည်နေရာ- အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ လိပ်စာ- Atatürk Havalimanı Karşısı 34149 Yeşilköy Booth No.: 9D104၊ HALL9ရက်စွဲ- 2022.06.09~2022....
Cannabis (THC) စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု
Cannabis သည် ဆေးခြောက်ပွင့်မှ ဆင်းသက်လာသော hallucinogen ဖြစ်သည်။ရှူသွင်းခြင်းသည် ၎င်း၏အဓိကအသုံးပြုနည်းဖြစ်သည်။မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ အများအပြား ရှူရှိုက်မိပါက ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး စိတ်ခံစားချက်ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်...
Omicron အမျိုးအစားခွဲ BA.2.12.1 ဗားရှင်း
မကြာသေးမီက အမေရိကန်ခရီးသွားများကြားတွင် BA.2.12.1 ကူးစက်မှုအသစ် ၅ ခုရှိကြောင်း တောင်ကိုရီးယားက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပျံ့နှံ့နေတာကြောင့် တောင်ကိုးရီးယားမှာ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေက...
အခန်း 401-406၊ F1-3၊ အဆောက်အဦ 1၊ No.425 Miaohouwang လမ်း၊ Xixing လမ်း၊ Binjiang ခရိုင်၊ Hangzhou၊ Zhejiang PR China
Novel coronavirus စမ်းသပ်ကိရိယာ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကို အမြန်စမ်းသပ်ပါ။, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စမ်းသပ်ကိရိယာ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် အမြန်ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ကိရိယာ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အမြန်စမ်းသပ်မှု,
ငါတို့က အရင်ကထက် ပိုနီးတယ်။